Umkhiqizi wekhebula le-China Quality Audio, Factory - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula lomsindo
Izintambo ze-CTC Connexions 2.2mm Optical Fibre Audio zilungele ukuxhuma amadivayisi anikwe amandla weToslink anjengeZipikha, ama-TV, ama-Projectors, ama-Blue players, ama-DVD player, kanye namarekhodi e-DAT anama-jacks wesitayela se-Toslink ajwayelekile.
I-CTC Connexionsâ „¢ 3.5mm kuya ku-2RCA Audio Cable ilungele ukuxhuma ipulagi engu-3.5mm kukhanda lekhanda ledivayisi yakho, njenge-Smart Phone noma i-PC kanye ne-2 RCA engxenyeni yangakwesokunxele nangakwesokudla kohlelo lwakho lomsindo.
Izintambo ezi-3.5mm zesilisa nezesilisa ziyahambisana nawo wonke amadivayisi anikwe amandla we-3.5mm wemoto ngesiginali engenakuqhathaniswa nekhwalithi yomsindo.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ikhebula lomsindo abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ikhebula lomsindo esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.